Myanmar Health – Page4– Healthy Life Journal
All posts tagged "Myanmar Health"
HIV ရှိသူများနှင့် ကူးစက်နိုင်ခြေမြင့်မားသော ဦးတည်အုပ်စုဝင်များအတွက် ပိုးစစ်ဆေးကာကွယ်ကုသမှုလုပ်ငန်းကို ၂၀၁၈-၂၀၁၉ နှစ်နှစ်တာ တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်မည်
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) HIV ရှိသူများနှင့် HIV ကူးစက်နိုင်ခြေမြင့်မားသော ဦးတည်အုပ်စုဝင်များအတွက် HIV ပိုးစစ်ဆေး ကာကွယ်ကုသမှုလုပ်ငန်းကို ၂၀၁၈-၂၀၁၉ နှစ်နှစ်တာ တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ခုခံအားကျဆင်းမှုနှင့် ကာလသားရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေးဌာန၊ စီမံချက် မန်နေဂျာဒေါက်တာထွန်းညွန့်ဦးက...
မြန်မာလူငယ်လူလတ်ကြား မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု လျော့ကျစေဖို့
ဒေါက်တာကျော်စွာဦး (ရောင်ခြည်သစ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း တာဝန်ခံ၊အထွေထွေရောဂါကု ဆရာဝန်)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှုန်းက အရင်နဲ့စာရင် မြင့်တက်မှုရှိပါသလား ဆရာ။ ဖြေ ။ လေ့လာတဲ့ စာတမ်းတွေအရကော၊ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ မှတ်တမ်းတွေအရပါ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မူးယစ်ဆေး ဝါးသုံးစွဲမှုမြင့်တက်လာတယ်လို့ သိရပါတယ်။...
သာမန်လူများကဲ့သို့ မဟုတ်ဘဲ အရေပြား တစ်လွှာသာ ပါသဖြင့် တစ်ကိုယ်လုံးအနာများနှင့် သွေးများထွက်နေရှာသည့် သမီးလေး ချစ်စနိုးဦး
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) မွေးရာပါ အရေပြားပါးလွန်းသည့် ရောဂါကြောင့် တစ်ကိုယ်လုံးအနာများဖြစ်ပြီး သွေးများထွက်နေရှာသည့် အသက် ၉ နှစ်အရွယ်သမီးလေးချစ်စနိုးဦးအတွက် ဆေးကုသစရိတ်နှင့် အာဟာရအခက်အခဲများရှိနေကြောင်း မိခင်ဖြစ်သူ မကြည်ကြည်သိန်း Healthy Life ဂျာနယ်သို့ ၂၃-၂-၂၀၁၈ ရက်နေ့က ပြောသည်။...
တောင်တွင်းကြီးမြို့နေ ဒေါ်ခင်မာကြူ၏ သည်းခြေအိတ်မှ သည်းခြေကျောက် ၉၀၁ လုံး တွေ့ရှိခဲ့ရ
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) တောင်တွင်းကြီးမြို့၊ ချောင်းနက်အရှေ့စုရွာတွင် နေထိုင်သည့် အသက် ၅၀နှစ်အရွယ် ဒေါ်ခင်မာကြူ၏ သည်းခြေအိတ်မှ သည်းခြေကျောက် ၉၀၁ လုံးတွေ့ခဲ့ရသဖြင့် ခွဲစိတ်ကုသမှုပေးခဲ့သည့် ဆရာဝန်ကိုယ်တိုင်ပင် အံ့အားသင့်ခဲ့ရကြောင်းသိရသည်။ “ရင်ခေါင်းအောင့်ပြီး တင်းနေတယ်။ ဘယ်လိုမှမနေနိုင်ဘူး၊ အစာလည်း လက်မခံဘူး။...
အသည်းရောင် အသားဝါစီပိုးနှင့် HIV ပိုး တွဲဖြစ်သည့် လူနာ ၁၆၀ ဦးကို ဝေဘာဂီ ဆေးရုံတွင် အခမဲ့ ကုသမှုပေးသွားမည်
♦ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) USAIDS ၏ Flagshipပရော့ဂျက်တစ်ခု ဖြစ်သည့် UHFစီမံချက်အရ အသည်းရောင်အသားဝါစီပိုး နှင့် HIVပိုးတွဲဖြစ်သူ လူနာ ၁၆၀ဦးကို ရန်ကုန်မြို့၊ ဝေဘာဂီဆေးရုံတွင် အခမဲ့ ကုသမှုပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန ခုခံအားကာလသားရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေးဌာန၊ စီမံချက်မန်နေဂျာ...
ရန်ကုန်ကလေးဆေးရုံကြီးသို့ ဆုံဆို့နာရောဂါကြောင့် ဆေးရုံတက်ရတဲ့ ကလေးတွေက ပိုများလာပါတယ် . . .
ဒေါက်တာညိမ်းအေးဝင့် (ကလေးအထူးကု ဆရာဝန်ကထိက၊ ကလေးကျန်းမာပညာဌာန၊ ဆေးတက္ကသိုလ်(၁)၊ ရန်ကုန်နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး. ဆုံဆို့နာရောဂါက ဘာကြောင့်ဖြစ်ရပါသလဲ ဆရာမ။ ဖြေ. ဆုံဆို့နာရောဂါဖြစ်စေတဲ့ C.diphtheriae ဆိုတဲ့ ဘက်တီးရီးယားပိုးကြောင့်ဖြစ်တာပါ။ မေး. ဆုံဆို့နာမဖြစ်အောင် ဘယ်လိုကာကွယ်လို့ရပါသလဲ ဆရာမ။ ဖြေ. ကာကွယ်ဆေးနဲ့ ကာကွယ်လို့ရပါတယ်။...
ဂျိုးဖြူရေနှင့် ပတ်သက်၍ အသည်းအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး ပါမောက္ခ ဦးခင်မောင်ဝင်း၏ ဖြေရှင်းချက်
#HealthyLifeJournal လတ်တလောတွင် ရန်ကုန်မြို့ကို ဖြန့်ဝေလျက် ရှိသော ဂျိုးဖြူရေပိုက်လိုင်းတွင် မစင်များ ပြန့်ပွားနေသည်ဆိုသည့် စကားကြောင့် ရန်ကုန်မြို့နေ ပြည်သူ ပြည်သားများ စိုးရိမ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ထိုအကြောင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ၂၆-၂-၂၀၁၈ ရက်နေ့၊ ညနေ (၄:၃၀) နာရီတွင်...
အဝလွန်ပြီး ဒူးနာနေသည့် ဒေါ်လှလှထံမှ ၁၅ ပေါင်လေးသည့် ဗိုက်အဆီကို ခွဲစိတ်ဖြတ်ထုတ်အောင်မြင်
♦ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) အသက် ၆၇ နှစ်အရွယ် ဒေါ်လှလှ၏ ၁၅ ပေါင်ခန့်လေးသည့် ဝမ်းဗိုက်အဆီကို နေပြည်တော်၊ ဇဗ္မူ သီရိဆေးရုံကြီးတွင် Senior Consultant Plastic Surgeon ဒေါက်တာဦးမင်းဇော်အောင် ဦးဆောင် သောအဖွဲ့က ၁၄-၁၂-၂၀၁၇ ရက်နေ့က...
ရန်ကုန်ကလေးဆေးရုံကြီးတွင် အသည်း အစားထိုးကုသမှု လုပ်ဆောင်မည်
ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) လာမည့် မတ်လတွင် ရန်ကုန်ကလေးဆေးရုံ ကြီးသည် ဂျပန် Kyushu National university hospitalနှင့် ပူးပေါင်းပြီး ကလေး အသည်းကင်ဆာ ဝေနာရှင်တစ်ဦးအား အသည်းအစားထိုးကုသမှု ဆောင်ရွက်ရန် ပြင်ဆင်ကြိုးပမ်းနေကြောင်း ရန်ကုန် ကလေးဆေးရုံကြီးမှ ဆေးရုံအုပ်ကြီး ဒေါက်တာဒေါ်...
မြန်မာနိုင်ငံသည် တီဘီ၊ ဆေးယဉ်ပါးတီဘီနှင်HIV-တီဘီရောဂါအဖြစ်များဆုံး တိုင်းပြည်ထဲ ပါဝင်နေ
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ကမ္ဘာပေါ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် တီဘီ၊ ဆေး ယဉ်ပါးတီဘီနှင့် HIV-တီဘီရောဂါ အဖြစ်များဆုံး တိုင်းပြည်ထဲ ပါဝင်နေကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန် အသင်း၊ ပြည်သူလူထုအခြေပြု ဆေးယဉ်ပါးတီဘီရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး စီမံချက်၏ စီမံချက် မန်နေဂျာ ဒေါက်တာဒေါ်ခင်ဆွေဝင်းက Healthy...